देशभर कोरोनाका सङ्क्रमित ह्वात्तै बढ्दा काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुरमा यसकारण अब खतरा हुदै ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/देशभर कोरोनाका सङ्क्रमित ह्वात्तै बढ्दा काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुरमा यसकारण अब खतरा हुदै !
सहप्रवक्ता डा अधिकारीले भारतबाट आउने क्रम बढेसँगै शङ्कास्पद व्यक्तिलाई परीक्षण गर्दा यति धेरैको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित पहिलोपटक सङ्क्रमित भेटिएको बताए । ‘‘पहिलाभन्दा अहिले भारतबाट मानिस पनि आवतजावत गरिरहेका छन्”, उनले भने, ‘‘क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई पनि हामीले बढी परीक्षण गरिरहेको हुनाले सङ्क्रमति फेला परेका हुन् ।” उनले धमाधम सङ्क्रमित भेटिरहेकाले निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मन्त्रालयले अहिले दैनिक एक हजारमा पिसिआर र करिब दुई हजारमा आरडिटी परीक्षण गरिरहेको छ । मुलुकभरि पिसिआर १९ ठाउँमा र आरडिटी ७७ जिल्लामा भइरहेको छ ।
यसै क्रममा सरकारले आइतबारदेखि उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो गरेसँगै चहलपहल बढेको छ। लामो समय घरभित्रै बसेका सहरवासी बाहिर निस्कन थालेका छन्। सुनसान बनेका सडक, पसल र भित्री गल्लीमा मानिसको भीडभाड बढेको छ।
दुई दिनयता सहरको दृश्य र चहलपहल हेर्दा उपत्यकामा लकडाउन नभएको महसुस हुन्छ। तर सरकारले यस्तो चहलपहल हुनेगरी लकडाउन खुकुलो गरेको भने होइन। अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय र उद्योग, खाद्यान्न पसल, कृषि सामग्री ढुवानीलगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर ससर्त निर्णयसहित उपत्यकालाई आइतबारदेखि खुकुलो पार्ने रणनीति अपनाइएको थियो। यसको अर्थ कसैलाई पनि बिनाकाम बाहिर निस्कन दिइएको भने होइन। तर उपत्यकामा दुई दिनयता बाहिर निस्कने क्रम बढेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ ।
लकडाउनमा कडाइ नगर्दा उपत्यकामा जथाभावी बाहिर निस्कने क्रम भने बढेको छ। लकडाउन गरेको लामो समय भएपछि जनजीवन र आर्थिक क्रियाकलापलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लकडाउन खुकुलो पारे पनि त्यसले झन् जोखिन निन्तिन सक्ने देखिने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। आइतबार बिनाकाम बाहिर निस्किएका १२ सय सवारीसाधन प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको परिसरका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रहरीले कडाइ गरे पनि अन्य दिनभन्दा आइतबारयता उपत्यकामा बाहिर निस्कनेको संख्या बढेको छ।
कतिपय मालवाहक सवारी उपत्यका प्रवेश गरेको दुई÷तीन दिनपछि मात्रै बाहिरिने गरेका छन्। त्यसबीचमा उनीहरू कहाँ बस्छन् र कहाँ खान्छन् भन्ने अवस्थाबारे सरकारी निकायले चुस्त रेकर्ड राख्न सकेका छैनन्। ‘अत्यावश्यक सामान बोकेका मालवाहक गाडी रोक्ने कुरा भएन तर उनीहरू भारतबाट आउने भएकाले बढी सचेत हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने। उनका अनुसार यसका लागि प्रहरी एक्लैले मात्रै सक्दैन।
पाँच दिनअघि उपत्यकामा जथाभावी सवारीसाधन प्रवेश गरेपछि गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू परिचालन गरेर ती सवारीलाई फर्काइएको थियो। त्यसयता प्रहरीले उपत्यका छिर्ने नाकाहरूमा थप कडाइँ गरेको छ। तर भिआइपी चढेर आएर गाडि र मालवाहक सवारीकै कारण उपत्यका कोरोना सर्ने हो कि भन्ने त्रास फैलिएको ललितपुरका सहायक प्रजिअ खिमराज भुसालले बताए। उनका अनुसार नाकाहरूमा कडाइ गरिए पनि उपत्यकामा भिआइपी र मालवाहक सवारीसाधन प्रवेश गरिरहेका छन्। यसकारण पनि उपत्यकामा संक्रमण फैलने त्रास देखिन्छ। ‘सबैभन्दा उच्च जोखिम भारतबाटै सामान बोकेर उपत्यका प्रवेश गर्ने सवारीबाट देखिन्छ, यसबारे ठोस उपाय निकालेर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
गृह मन्त्रालयले भने चालक र मालवाहक सवारीसाधन तुरुन्तै फर्कनुपर्ने भनेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले चालकलाई तुरुन्तै फर्काउने गरिएको र बास बसे पनि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएर बस्नुपर्ने नियम रहेको बताए। ‘सामान झारिसकेर त्यो सवारी सीधै फर्कनुपर्छ, अन्यथा हामीले प्रहरीलाई रेकर्ड राखेर कारबाही गर्न भनेका छौं,’ उनले भने। तर लामो दूरीमा सवारी हाँकेका चालकहरू भने उपत्यका प्रवेश गरिसक्दा थाकेर चुर हुने भएकाले सिधै फिर्ता नहुने महानगरीय प्रहरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी भीम ढकालले जानकारी दिए। उनले लामो दुरीमा सवारी हाँकेका चालकलाई दबाब दिएर तुरुन्तै फर्कनुस् भन्न अलि नसुहाउने बताए।
‘सकेसम्म प्रहरीले उनीहरुको निगरानी राखेको छ तर ट्राफिक प्रहरीले मात्रै पनि सबै चालकहरूलाई पछ्याउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरु चालकलाई सरकारले बस्ने ठाउँ तोकिदिने र उच्च निगरानी राख्ने गरे धेरै राम्रो हुन्थ्यो। ’ उनले पछिल्लो समय मिटिङ र भेलाका लागि भन्दै विभिन्न ठाउँबाट भिआइपीहरू उपत्यका प्रवेश गरिरहेको बताए।
कोरोनाबाट मृ’त्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई २० लाख राहत दिने गाउँपालिकाको घोषणा
कोशीको बगरमा गोलभेँडा खेती, यस्तो राम्रो आम्दानी देखेर सबै चकित !
रुकुम घटनाको नया रहस्य ! नवराजको गुप्ताङग नै काटेर फालेको आरोप हेर्नुस्